खेलकुद उत्पादनमुलक क्षेत्र हुनु पर्छ ःप्रसाइ | KhelkudNews.com
Published on September 17, 2017, by Manoj Shiama - Posted in Featured, Karate, Slideshow 0
ओमकृष्ण प्रसाइ, नेपाली करातेका परिचीत ब्यक्तित्व । थुप्रै पदीय जिम्मेवारी बहनमा सफलता पाइसकेका उनी हाल राजनितीक रुपमा पनि सक्रिय छन् । एमाले प्रबेश नम्बर तीनका बैठकले उनलाइ युवा तथा खेलकुद विभागको प्रमुख तोके पछि उनी खेल क्षेत्रमै थप चासो र चर्चाको पात्र बनेका छन् । यस अघि नेपाल गोजुरियो ओसीकारइ कराते संघका महासचिव, नेपाल गोजुरियो कराते महासंघका महासचिव तथा नेपाल कराते महासंघका सचिवको रुपमा जिम्मेवारी पुरा गरेका छैठौ डानका उनले रेफ्रि र प्रशिक्षकको रुपमा समेत थुप्रै महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । तीनै प्रसाइसंग खेलकुद न्युजडटकमले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप
यत्ती महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ? अन्य राजनितीकर्मीको भन्दा नयाँपन के दिनु हुन्छ ?
पहिलो कुरा त मेरो विगत नेतृत्वदायी भुमिकाको रुपमा नै वितेको छ । ती सबै अनुभबले मलाई सहयोग गर्ने छ । म पार्टीले दिएको यो भुमिकामा सफल हुनेमा बिश्वस्त छु । राजनितीमा चासो राख्ने धेरै खेलकर्मी हुनु हुन्छ । मेरो सफलता ती सबै खेलकर्मीका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । खेलकर्मी समाजका अन्य क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न अझ बढी सक्षम हुन्छन्, भन्ने प्रमाणीत गर्न पनि यो जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
तपाइका सामु चुनौती पनि त होलान् नी ?
पक्कै छन् । नेपाली खेलकुद र राजनिती दुवै क्षेत्रमा त्यत्तिकै छन् । यी सबै चुनौती र समस्या समाधान गर्नका लागि म विज्ञहरुसंग सल्लाहमा अघि बढ््दै छु । देश संघीय स्वरुपमा गइसकेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनले अब तीन नम्बर प्रदेशमा हाम्रो पार्टी एमालेको एकल नेतृत्व रहने आधार खडागरिसकेको छ । यसकारण पनि हाम्रा सामु धेरै चुनौती छन् । हामीप्रति युवा पुस्ताले गरेको आशा र भरोसा अनुसार भुमिका रहन्छ भन्नेमा बिश्वस्त नै छु ।
तपाइको पार्टीको गुटगत समस्याले नै तपाइलाई काम गर्न गाहे हुदैन र ?
गुटको प्रभाव नभएको होइन । तर, एमालेमा गुटकै कारण आएका समस्या पनि बसेर आन्तरिक रुपमै समधान भएका छन् । यसमा अझ हामी खेलकर्मीको त तथ्यलाई सहज स्वीकार गर्ने आदत हुन्छ । यसै आदतले पनि सही कुरा त सबैबाट स्वीकार गरिन्छ नै । मलाई बिश्वास्छ, यो जिम्मेवारी निर्बाह गर्नका साथै सही निती नियम बनाउने मैले सबैको सहयोग पाउने छु ।
नेपालमा पछिल्लो समय आएको ब्रेन ड्रेनको समस्या छ भनीन्छ नी ?
भएको हो । मलाई लाग्छ, संघीय स्वरुपमा हामी पुगे पछि यो समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ । तल्लो तहसम्म हुने उद्धोगीक विकासले हरेक युवाले आफूमा भएको क्षमताको भरपुर उपयोग गर्दै आफूलाई सबल बनाउने बाटो खुल्छ । ब्रेन ड्रेनको समस्या यसैले समाधान गर्छ जस्तो लाग्छ । खेलकर्मीकै रुपमा मैले बुझेको कुरा के हो भने युवा पुस्ताको सही उपयोग विना कुनै पनि विकासको सम्भावना रहदैन । यसकारण हामी ब्रेन ड्रेनको समस्या समाधान गर्न सचेत छौ ।
खेलकुदमै बारे थप योजना ?
खेलकुदलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा ब्याख्या गरिदै आइयो । नेतृत्वले यसलाई सही रुपमा उपयोग गर्न नसकेको कारण पनि यो ब्याख्या सही सावित भयो । तर, मलाई लाग्छ, खेलकुद उत्पादनमुलक क्षेत्र हो । पर्यटीकीय खेलकुदको विकास एउटा महत्वपूर्ण पाटो । अर्को हाम्रो खेलस्तर बृद्धी भए यसले हाम्रो आर्थीक स्तरलाई पनि माथि उठाउने नै छ । यसमा पनि म सचेत छु ।